Ku cusub Mac? Tilmaamahan yar ayaa wax badan kaa caawin doona | Waxaan ka socdaa mac
Hambalyo iyo bogaadin. Waxaad durba xubin cusub ka noqotey kuwa doortey wanaagga shaqada iyo waqtiga firaaqada. Iibsashada Mac waa guul horumarineed marka la barbardhigo kombiyuutarada leh nidaamka qalliinka. Macno malahan haddii lagu siiyay (ama lagu siiyay) MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, iMac ama Mac Pro, dhammaantood waxay wadaan macOS. Waa faraq weyn oo ka Windows laakiin hagitaankan yar waxyaabaha ayaa kuu sahlanaan doona.
Ka dib markii aad bilowdid Mac markii ugu horeysay oo aad raacdo tilmaamaha ay Apple u calaamadeysay, kuna xirayo internetka, xulashada magaca isticmaalaha iyo lambarka sirta ah iyo xitaa cusbooneysiinta nidaamka qalliinka, waxaad horey u haysataa kombiyuutarka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo gaar ah oo aad sameyn kartid waana ku mahadsan tahay tilmaamahan yar wax walba way kuu fududaan doonaan. Waa hage aasaasi ah, laakiin wax badan ayey kaa caawin doontaa bilowgaaga.
2 Taabo Bar
4 Bar menu
6 Tooska ah
7 Bakhaarka Mac App
Hadda waxaa la joogaa waqtigii aad ku dhisi lahayd Apple Pay-ka Mac-gaaga.Waxaan u qaadaneynaa inaad horeyba u sameysatay Aqoonsiga Taabashada bilowga ah adoo raacaya tilmaamaha Apple. Apple Pay waa hab aamin ah oo fudud oo lacag lagu bixiyo iyada oo loo marayo Mac iyada oo aan la gelin faahfaahinta habka lacag bixinta mar walba. Aad waxtar badan, laakiin marka hore waa inaad ogaataa waxaad sameyneyso. Dhibaato ha ku qabin inaad u qaabeyso maxaa yeelay dhammaan xogta waxay ku keydsan yihiin qashin gooni ah iyo cidna lala wadaagin wakhti kasta.
Apple Pay waxay isticmaashaa tikniyoolajiyad soo saarta kaar dalwad cusub leh oo la xidhiidha taada. Markaad wax bixiso, waxaad ku sameysaa midka muuqaalka ah, marka xogtaada dhabta ah runti lama wadaago waqti kasta. Waxaa sidoo kale lagu xaqiijiyaa Touch ID.
Si loo qaabeeyo waa inaan tagnaa nidaamka doorbidida oo aad doorato qaybta Apple Pay oo raac tilmaamaha uu kombiyuutarka ku siiyo. Waa mid aad u fudud oo ammaan ah. Bal u fiirso maqaalkan.
Bar taabashada waa guddi OLED ah kaas oo fadhiya guud ahaan kiiboodhka isla markaana beddelaya safka furayaasha shaqada. Waa macnaha guud, taas oo macnaheedu yahay waxa gudiga ka muuqda wuu isbadalayaa, iyadoo kuxiran dalabka aad hada isticmaaleyso Sidoo kale waa la beddeli karaa, oo kuu oggolaanaya inaad qaabeyso barnaamijyo kala duwan (oo ay ku jiraan codsiyada dhinac saddexaad ee taageeraya u-habeynta) si loo hagaajiyo socodkaaga shaqada.
Eeg sida ay isku beddeleyso mid kasta oo ka mid ah codsiyada aad hayso oo arag adigoo riixaya furayaasha si aad u aragto inay run ahaantii waxtar u leedahay shaqadaada. Xitaa sidaas, haddii aad rabto inaad wax ka beddesho baarka, waa inaad fulisaa talaabooyinka soo socda:
Waxaan gujineynaa shaashadda desktop-kaaga> Ka eeg bar menu-ka dusha sare ee shaashaddaada 'Mac'.
Waxaan dooranaa Ka Abaabul Taabashada Bar Bar-hoosaadka hoos u dhaca.
Waan doorannaa waana jiidi doonaa qalab ka socda gudiga qaabeynta dhanka hoose ee shaashadda.
Dock-ka ayaa ah waxa aad u maleyn karto inuu yahay qaybta "ugu cadcad" ee Mac-gaaga. Wuxuu kaydiyaa dhammaan barnaamijyadaada ugu muhiimsan, faylasha, iyo faylalka si dhakhso leh loogu soo galo. Waxay sidoo kale si kumeelgaar ah uga kooban tahay codsiyo, faylal, iyo fayl kuwa hadda furan, sidaa darteed waxaad ku heli kartaa hal guji, halkii aad ka baari lahayd daaqadahaaga iyo barnaamijyadaada furan.
Baarka menu-ka ayaa ku yaal xagga sare shaashadda Mac-gaaga. Waxay ku jirtaa liiska Apple, kaas oo ku geyn doona dhammaan nidaamkaaga nidaamka, menu-ka dalabka, taas oo gaar u ah barnaamijka aad hadda isticmaaleysid, dariiqooyinka kumbuyuutarka sida loo soo gaabiyo, iyo qalabka saddexaad ee raadinta degdegga ah ee loo yaqaan 'Spotlight' iyo 'Siri'.
Ka fikir Finder sidii meel aad ka heli karto wixii kale ee ku saabsan Mac-gaaga. Mararka qaar waa habka ugu fiican ee lagu helo waxaad raadineyso (in kasta oo tooshku runtii siiya isku day). Qaybta ugu fiican ayaa ah inaad sidoo kale marin toos ah ugu hesho barnaamijyada daruurta ku saleysan ee Finder. Markaa uma baahnid inaad ka baartid barnaamijka 'Dropbox' ama 'iCloud Drive app'
Barta bartamaha asal ahaan waa barnaamijka raadinta ugu adag halkaas. Waxay baareysaa feylashaada shaqsiyeed, galkaaga, barnaamijyadaada, emaylladaada, iyo waxyaabaha kale si aad u soo saarto natiijooyinka aad u badan tahay inaad raadineysay meesha ugu horeysa. Waxay sidoo kale baareysaa shabakadda si ay u daboosho dhammaan saldhigyada. Haddii aad raadineyso wax, Tooska ayaa u badan inuu helo. Hal dariiqo oo si dhakhso leh loogu heli karo ayaa ah adigoo riixaya barta bannaan iyo furaha Taliska. Waad ku habeyn kartaa adoo adeegsanaya nidaamka xulashada nidaamka.
Bakhaarka Mac App
Bakhaarka Mac App waa meesha aad ka heli doonto qaar ka mid ah codsiyada ugu fiican iyo ciyaaraha loogu talagalay Mac. Sidoo kale waa tag-meesha marka aad u baahan tahay inaad cusboonaysiiso nidaamkaaga hawlgalka ee Mac iyo barnaamijyada kale ee software-ka ah. Waa inaad u booqataa waqti ka waqti si aad ula socotid wixii ku soo kordha. Waxaan u baahan doonaa aqoonsi Apple si aan u isticmaalno.
Casharadan aasaasiga ah ee ugu horeeya ee tilmaamahan yar, waxaad awoodi doontaa inaad ku badbaado maalmaha ugu horeeya nidaam cusub oo aad ku shaqeyso iyo Mac cusub. Si tartiib tartiib ah ayaad kalsooni ku heli doontaa. Xusuusnow taas "Nidaamyada aad doorbideyso" waa halka aad ku habeyn karto oo aad ku habeyn karto Mac-gaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Ku cusub Mac? Tilmaamahan yar ayaa wax badan kaa caawin doona
Baro sida loogu habeeyo Apple Watch-kaaga cusub sidaad u jeceshahay